January 8, 2022 – ဝင်းမေတ္တာ
ယောဂီများတွက် ကျန်းမာရေး ကဏ္ဍ
ဓမ္ဓ စာအုပ်၊ ဆော့ဖ်ဝဲ Download
ညနေ (၂၂၄) – ရာဂစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း (၂)
January 8, 2022 February 19, 2022
ထေရဝါဒ ဓမ္မကမ္မဌာန်း လမ်းစဥ် အပိုင်း(၂၂၄) မဟာသမယသုတ်များ ရာဂစရိုက်ရှိသူတို့အတွက်ကျင့်နည်း အပိုင်း (၂) (သမ္မာပရိဗ္ဗာဇနိယသုတ်၊ သုတ္တနိပါတ်၊ ၃၅၅) အမေးအဖြေ ကဏ္ဍ ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါတို့၏ အဖော်ဖြစ်ပါသလဲ? ဘယ်အရာသည် သတ္တဝါကို ဆုံးမပါသလဲ? သတ္တဝါသည် ဘယ်အရာ၌ မွေ့လျော်သည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခအားလုံးမှ လွတ်မြောက်ပါသလဲ? နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ မဟာသမယသုတ်များ သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
နံနက် (၁၇၉) – ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ် (၂)
တရားလက်တွေ့ကျင့်သုံးခြင်း (၁၇၉) နံနက် သီလခံယူ, ဘုရားဝတ်ပြု, အလုပ်ပေးတရား စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အပိုင်း (၂) ဂဒ္ဒုလဗဒ္ဓသုတ် (သံ၊ ၂၊၁၂၁) နမော တဿ ဘဂဝတော အရဟတော သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ (သုံးကြိမ်) သင်တန်း တရား ရှုမှတ်ခြင်း နှင့် တရားသိမ်း သင်တန်းမှတ်စုများ Downloads ဆရာတော် အဂ္ဂမဟာကမ္မဋ္ဌာနာစရိယ မေတ္တာနန္ဒဆရာတော် ဦးဃောသိတာဘိဝံသ (မေတ္တာနန္ဒဝိဟာရ, Califorina, U.S.A.) မှ သင်ကြားပို့ချသည်။ စိတ်ဓာတ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး သင်တန်းနှင့် မှတ်စု
အဘိဓမ္မ – ကမ္မဋ္ဌာန်းပိုင်း
အဘိဓမ္မ – ဝီထိပိုင်း
အဘိဓမ္မ – ရုပ်ပိုင်း
ဘဝသံသရာခရီးသည်၏ ပဲ့ကိုင်ရှင် (သင်္ခါရုပပတ္တိသုတ်)
ပြည့်စုံမှုနှင့် ပျက်စီးမှုတို့၏ အကြောင်းများ (သမုဒ္ဒကသုတ်)
အားကိုးတရား ရှိထားစေချင် (ထမနာထသုတ်)
Archives Select Month	May 2022 April 2022 March 2022 February 2022 January 2022 December 2021 November 2021 October 2021 September 2021 August 2021 July 2021 June 2021 May 2021 April 2021 March 2021 February 2021 January 2021 December 2020 November 2020 October 2020 September 2020 August 2020 July 2020 June 2020
facebook, YouTube တွင် လည်း ဗွီဒီယိုများ Videos ရှိသည်။
Win Metta - Facebook
Win Metta - YouTube
Win Metta - Viber Community
Copyright © 2022 ဝင်းမေတ္တာ